Ogaden News Agency (ONA) – Wadamada Midawga Yurub oo Kawada Tashanaya Arimaha Qaxootiga.
Wadamada Midawga Yurub oo Kawada Tashanaya Arimaha Qaxootiga.
Posted by ONA Admin	/ March 4, 2016
Madaxa Golaha Yurub, Donald Tusk, ayaa sitoos ah ugu baaqay dadka sharci darada ku imaanaya Qaarada Yurub. Wuxuu sheegay inaysan qaxootigu aaminin dadka sharci darada kusoo qaadaya, oo aysan ku aaminin noloshooda iyo lacagtooda.
Mr. Tusk oo ka hadlayay magaalada Athens ee caasimada dalka Gariiga, ayaa sheegay in dadka sharci darada ku yimid Yurub aysan ka gudbi doonin Gariiga. Taasoo aysan horay usii socon doonin tan iyo intii xalkale looga helayo.
Wuxuu sidoo kale ku baaqay in la soo celiyo habka Schengen ee baasaboorka la’aanta la isaga goosho qaarada Yurub dhexdeeda oo burburtay kadib markii ay mawjado qaxooti ah kusoo qexeen qaarada Yurub, laakiin la adkeeyo xuduuddaha.